चुइगम खानुहुन्छ ? यस्ता छन् स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरहरु - Everest Dainik - News from Nepal
चुइगम खानुहुन्छ ? यस्ता छन् स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरहरु
माघ १३ । चुइङगम चपाउने अनि पड्काउने अधिकांश किशोर किशोरीहरु हुन्छन् । चुइगमको प्रयोग गरे दाँत सफा हुन्छ भन्ने भ्रम पनि छ कतिमा तर यसको हानिकारक पक्षबारे भने कोही सचेत भएको पाईंदैन ।
प्राचिन ग्रीकमा पनि मानिसहरु दाँत सफा गर्न र श्वास स्वच्छ राख्न रुखको चोप चपाउँथे । आनन्दका लागि रुखको चोप चुइङगमको रुपमा चपाउने गर्थें । अचेल चुइङडम विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
इजरायलको तेलअबिब विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अनुसन्धानका अनुसार बच्चा तथा किशोरहरुमा चुइङगम चपाउने बानीले टाउको दुखाइएको समस्या निम्त्याउँछ ।
अध्ययनमा संलग्न मेर मेडिकल सेन्टरका डा. नाथन बोटेम्बर्गका अनुसार चुइङगम चपाउने बानी छाडिदियो भने टाउको दुख्ने समस्या निकै समाधान हुन्छ ।
यस्ता छन् चुइगमले मानिसको जीवनमा पार्ने केहि नकारात्मक असरहरु :